काठमाडौं, ३ माघ — उद्यमी कर्ण शाक्यले थोरै पैसामा पनि धेरैनै आम्दादानी गर्न सकिने युवा पुस्तालाई सुझाएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘यसरी सम्भव छ उद्यमशीलता बढाउन’ शीर्षकमा लेख लेखेका उनले मासिक १० लाख ५० हजार कमाउने सजिलो उपाय सुझाएका छन् ।
उद्यमशीलता कसरी बढाउने ?
उनले भनेका छन् — उद्योगमा लगानी आवश्यक छ । तर लागानी सबथोक हैन । सबभन्दा ठूलो विषय विचार हो । पैसा नभइ काम गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको होइन, तर कुन काम ? के काम ? भन्ने विषय निर्धारण गरेपछि पैसा ठूलो विषय होइन ।
उद्योगका लागि सबैभन्दा पहिले विचार चाहिन्छ । म कहाँ समुह बनाएर युवाहरु यति पैसा छ के गर्ने भनेर सोध्न आउँछन् । थोरै पैसामा धेरै कमाउने हो भने हामी मोमो बेच्न सक्छौं ।
उदाहरणका लागि आज म २० — २२ वर्षको तन्नेरी भएको भए । बिए पास गरेको भए । धेरै लगानी नभएको भए । मलाई कमाउने इच्छा भएको भए । सबैभन्दा पहिले मोमो बनाउने योजना बनाउँथेँ । अर्को एउटा साथीलाई खोज्थेँ । आधा आधा लगानी गरेर काम सुरु गर्थें ।
एउटा आकर्षक नाम दिन्थेँ । रेलिमा, रेलिमाइ लाहुरे दाइको रेलिमाइ भनेर मामोको नाम राख्थेँ । यस्तो नाम होस जुन सजिलै जिब्रोमा झण्डिन सफल होस् ।
नेपालमा धेरै भाषण हुन्छ । भाषण हुने ठाउँमा ब्यानर सहित प्याकिङ मोमो राख्थेँ । सफा कपडा लगाएर बस्थेँ । भाषण सुनेर भोक लागेको मान्छेले पक्कै पनि खाजा त खाइहाल्छ ।
त्यहाँबाट हिँड्ने बेलामा कुनै फोहोर राख्दिनथेँ । सोँच्नुहोस त दिनको पाँच सय प्लेट मोमो नजाला ? एक प्लेट मोमो को १०० रुपैयाँ । पाँच सयको ५० हजार आम्दानी ।
ख्र्च ३० प्रतिशत होला । बाँकी ७० प्रतिशत नाफा हुन्छ । अरुलाई गाली मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । काम गर्ने दिमाग र इच्छा शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ । यहाँका धनी मान्छेले यसरीनै प्रगति गरेका हुन् ।
एक दिनमा ५० हजारको मोमो बेच्यो भने मासिक १५ लाखको मोमो बेच्न सकिन्छ । १५ लाखबाट ३० प्रतिशत खर्च कटाउँदा ४ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । १० लाख पचास हजार बँच्छ ।
यो विषयमा उनले आफ्नो टुइटरमा लेखेका छन् कि — एक वर्षमा एउटा गाडी किनेर गाडीबाटै मोबाइल मोमो पसल संचालन गर्न सकिन्छ । विस्तारै करोडको पाइला पनि चाल्न सकिन्छ ।
(कर्ण शाक्य सोँच, खोज र मोज पुस्तकका लेखक हुन । उनी सकारात्मक सोँचका प्रबद्र्धक समेत हुन । उनले नेपालमा अरबौं लगानीमा होटल व्यवसाय संचालन गरेका छन् । आफू क्यान्सर पीडित भएपनि उनी निकै उत्साहका साथ बाँचिरहेका छन् ।)
माघ ३, २०७३ मा प्रकाशित